Etu ị ga - esi họrọ aha oke ifufe, ifufe na ihe onyonyo ihu igwe ndị ọzọ | Network Meteorology
Na-ekiri ndị akụkọ na igwe onyonyo ma ọ bụ ịgụ ya n'akwụkwọ akụkọ, n'ezie ị juwo ihe karịrị otu oge ihe kpatara ya a tonado ma ọ bụ ajọ ifufe Ọ nwere otu aha na ihe bụ usoro agbasoro iji họrọ ya. Mgbe ahụ, m ga-ekpochapụ obi abụọ gị niile ma kọwaa nke ọma otu esi eme ya ha na-ahọrọ aha nke ihe omimi.
Ingkpọ ụdị dịgasị iche iche nke ihu igwe na-eme n'ụwa, malitere afọ ole na ole gara aga iji nyere ụmụ amaala aka ịmata ngwa ngwa. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo ọ dị mfe icheta aha mmadu karịa nọmba ole na ole ma ọ bụ okwu teknụzụ. Na mgbakwunye na nke a, ndị mgbasa ozi nwere ọ dị mfe karị ma a bịa n'ịkọ banyere ha.
Na mbu, ahotara aha ndi aka ike udi na-agbasoghị usoro ọ bụla. Malite na narị afọ nke XNUMX, a malitere ịmata ihe dị ịtụnanya na aha ụmụ nwanyị. Kemgbe ọtụtụ afọ, n’afọ 1979, a malitere itinye aha ụmụ nwoke. Na 1980, World Meteorological Organisation na United States Meteorological Service kpebiri site na nkwekorita na aha ozo ndi nwanyi na ndi nwoke n'oge aha oké ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe.
Akụkụ ụwa ndị na-adịkarị mfe ụdị ihe ahụ nwere ha aha aha. Enwere aha 6 nke aha na-agagharị maka mpaghara Atlantic na ndị ọzọ maka mpaghara Pacific, kwa afọ a na-eji otu n'ime ha eme ihe na mgbe 6 afọ a na-eji nke mbụ eme ihe ọzọ. Ọ bụrụ na oké ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe na-ebibi ihe n'ezie ma na-ebute ọtụtụ ihe dị oke njọ na mmebi onwe onye, ​​aha ahụ anaghị eji ya ọzọ maka ebumnuche uche. Nke a bụ ihe gbasara Ajọ Ifufe Katrina, nke aha ya agaghi eji ozo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ka esi akpọ oke ifufe, ifufe, na ihe ndị ọzọ gbasara ihu igwe
olee ụdị ala ọ bụ?
Zaghachi ana paola